Vonona ny hampiasa angona lehibe ve ny fikambanananao? | Martech Zone
Big Data dia faniriana bebe kokoa noho ny zava-misy ho an'ny ankamaroan'ny fikambanana marketing. Ny marimaritra iraisana momba ny soatoavina stratejika Big Data dia manome alàlana amina olana ara-teknika marobe ilaina amin'ny famolavolana ekosistia data ary hitondra hevi-baovao momba ny data amin'ny fifandraisana manokana.
Azonao atao ny manombantombana ny fahavonanan'ny fikambanana hampiasa ny Big Data amin'ny alàlan'ny famakafakana ny fahaizan'ny fikambanana manerana ireo faritra fito lehibe:
Fahitana stratejika dia ny fanekena ny Big Data ho mpandray anjara lehibe amin'ny fanatanterahana ny tanjon'ny orinasa. Ny fahafantarana ny fanoloran-tenan'ny C-Suite sy ny fividianana trano no dingana voalohany, arahin'ny fizarana fotoana, fifantohana, laharam-pahamehana, loharano ary angovo. Mora ny miresaka ilay resaka. Tadiavo ny tapaka matetika eo amin'ireo tompon'andraikitra ambony izay manao safidy stratejika sy mpahay siansa momba ny angon-drakitra, mpandalina data ary mpivarotra mifantoka amin'ny data izay tena manao ilay asa. Matetika dia tapaka ny fanapahan-kevitra nefa tsy misy fampiasa ao amin'ny sehatry ny asa. Matetika, ny fahitana avy any ambony sy ny fijery avy eo afovoany dia samy hafa tanteraka.
Data Ecosystem mety ho vato mahatafintohina na mpanampy. Orinasa maro no voafandriky ny rafitra lova sy ny fampiasam-bola rendrika. Tsy ny orinasa rehetra no manana fahitana mazava amin'ny ho avy nofaritana tamin'ny fantson-drano efa misy. Matetika misy ny fifanolanana eo amin'ireo mpitantana ara-teknikan'ny tontolon'ny IT sy ireo mpampiasa raharaham-barotra izay mampitombo ny tetibola mifandraika amin'izany. Amin'ny tranga maro, ny vina mandroso dia fanangonana vahaolana. Manampy ny fisafotofotoana ireo orinasa 3500+ manolotra vahaolana isan-karazany amin'ny teknolojia manao fanambarana mitovy amin'izany, mampiasa fiteny mitovy ary manolotra fifanarahana mitovy amin'izany.
Data Governance dia manondro ny fahazoana loharanom-pahalalana, manana drafitra ho an'ny ingestion, normalization, fiarovana ary laharam-pahamehana. Izany dia mitaky fitambaran'ny fepetra fiarovana haingana, fitondrana manome alalana mazava tsara sy ny lalan'ny fidirana sy fifehezana. Ny lalàna mifehy ny governemanta dia mandanjalanja ny fiainana manokana sy ny fanarahana ny fampiasana mora ampiasaina sy ny fampiasana indray ny angona. Matetika ireo olana ireo dia mikorontana na mifamatotra amin'ny toe-java-misy fa tsy taratry ny politika sy ny kaodrafitra efa voaomana tsara.
Analytics ampiharina dia mari-pamantarana ny fahaizan'ny nandefasana fikambanana iray Analytics loharanom-pahalalana ary afaka mitondra fahaiza-manao artifisialy sy fianarana milina. Ny fanontaniana manakiana dia: ampy ve ny fikambanana iray Analytics loharanom-pahalalana ary ahoana no ampiasana azy ireo? Moa Analytics tafiditra ao anaty fizotran'ny marketing sy stratejika, na nipaipaika tamin'ny ad hoc? Moa Analytics mitarika fanapahan-kevitra lehibe momba ny raharaham-barotra sy mahomby amin'ny familiana amin'ny fahazoana, fitazonana, fihenam-bidy ary fahatokisana?
Fotodrafitrasa teknolojia manombatombana ireo rindrambaiko sy rafitry ny angon-drakitra ampiasaina handraisana anjara, hanodinana, hanadio, hiarovana ary hanavao ireo ony mombamomba azy ao amin'ny ankamaroan'ny orinasa. Ny tondro manan-danja dia ny haavon'ny automatisation sy ny fahaiza-manao manatsara ny angon-drakitra, mamaha ny mombamomba ny tsirairay, mamorona fizarana misy dikany ary mandray hatrany ary mampihatra tahirin-kevitra vaovao. Ny tondro tsara hafa dia ny fifanarahana amin'ny ESP, ny automatisation marketing ary ny mpamatsy computing cloud.
Mampiasà Fampandrosoana tranga mandrefy ny fahaizan'ny orinasa iray hampiasa ny angon-drakitra angoniny sy arahin'izy ireo. Azon'izy ireo atao ve ny mamantatra ny mpanjifa "tsara indrindra"; maminavina tolotra tsara indrindra amin'ny manaraka na hikolokolo ireo tsy mivadika? Manana mekanisma indostrialy hamoronana hafatra manokana izy ireo, hanao fizarana bitika, hamaly ny fihetsika amin'ny haino aman-jery finday na media sosialy na hamorona fampielezan-kevitra marobe atolotra amina fantsona maro?
Manaiky lehilahy matematika dia famantarana ny kolontsain'ny orinasa; fandrefesana ny tena filan'ny fikambanana fikajiana, hananganana ary hahazoana fomba vaovao sy teknolojia vaovao. Ny tsirairay dia mandefa ny kabary fanovana nomerika sy data. Saingy maro no matahotra WMDs (fitaovam-piadiana fanelingelenana matematika). Vitsy ny orinasa manambola ny fotoana, ny enti-miasa ary ny vola hahatonga ny centricity data ho fananana lehibe eo amin'ny orinasa. Ny fahazoana ny fahavononan'ny Big Data dia mety ho lava, lafo ary mahasosotra. Mila fanovana lehibe eo amin'ny toetra sy ny fizotran'ny asa ary ny haitao hatrany izany. Ity mari-pamantarana ity dia mandrefy ny tena fanoloran-tena ataon'ny fikambanana amin'ny tanjon'ny fampiasana angona ho avy.
Ny fahatsapana ny tombotsoan'ny Big Data dia fampiharana amin'ny fitantanana fanovana. Ireo masontsivana fito ireo dia ahafahantsika mahazo maso amin'ny masony mazava tsara amin'ny toerana misy ny fiovan'ny rafitra omena. Ny fahalalana ny toerana misy anao mifanohitra amin'izay tianao hahatongavana dia mety ho fanatanjahan-tena mahasoa raha toa ka mampihetsi-po.
Tags: analytics ampiharinalehibefotodrafitrasa data lehibetranga fampiasana angona lehibefitantanana fitantananamandihy amin'ny alàlan'ny revolisiona nomerikaekosistra datany governemantamatematikaMatematikafahitana stratejikafotodrafitrasa teknolojiaampiasao ny tranga